မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်တပါး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဆေးကု သွားခွင့်ရ | ဧရာဝတီ
မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်တပါး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဆေးကု သွားခွင့်ရ
ဧရာဝတီ| December 13, 2012 | Hits:1
| | လက်ပံတောင်းတောင်အရေး အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲမှုကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံဃာတပါးဖြစ်သည့် ဦးတိက္ခဉာဏသည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ဆေးကုသရန် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် သွားရောက်မည်ဟု ဒဏ်ရာရသံဃာတော်များကို ကူညီပေးသူများက ဆို သည်။ ဒဏ်ရာရသံဃာတော်များ ဆေးကုသရေးအတွက် ရွှေည၀ါဆရာတော်မှ လှူဒါန်းငွေများ ကူညီပေးထားကြောင်း၊ ပြည်ပတွင် ဆေးကုသရေးအတွက် အကူညီများလိုအပ်နေသေးကြောင်း၊ အခြားသံဃာတော် ၄ ပါးမှာ မန္တလေး ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသ ခံယူနေဆဲဖြစ်ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မရရှိသေးကြောင်း ဒဏ်ရာရသံဃာများ ကူညီရေးအဖွဲ့မှ ဆရာတော် ဦးဝိမလက မိန့်ကြား သည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Numaripan December 14, 2012 - 6:25 pm	How can I donate money to the young who came and have medical care at Thailand. Can I know the address of the place that young monk stay or Can I know the ways that how can I donate money to him..
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ဖိုင်ဘာ ဆက်ကြောင်း စနစ် ဂျပန် ကုမ္ပဏီများ လုပ်ကိုင်မည်